သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ… – Trend.com.mm
လူတိုင်းမှာခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့သူငယ်ချင်းကောင်း တစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့ပြီလား?သင်ကိုယ်တိုင်ရော သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီလား? ကိုယ်တိုင်မဖြစ်သေးပဲနဲ့တော့ တခြားသူတစ်ယောက်ကောင်းဖို့ကိုမျှော်လင့်လို့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်းသူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်မှတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာရမှာပါ။ဒါဆိုရင်သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
သူငယ်ချင်းအများစုက အဖြူရောင်မုသားကိုသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ဒါကလည်း သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်း အပေါ်မနာကျင်စေချင်လို့ပါ။ဥပမာ သူငယ်ချင်းတွေကရုပ်ရှင်ရုံသွားမယ်လို့ပြောရင် တကယ်မသွားချင်ပေမဲ့လည်း တစ်ခါတည်း မငြင်းရက်ကြပါဘူး။စိတ်မပါပေမဲ့လည်း လာဖြစ်ရင်လာဖြစ်မယ်လို့ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချိန်းထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင် ကိစ္စရှိလို့ဘာညာအကြောင်းပြပြီး မရောက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါက ပိုပြီးစိတ်ဆိုးစရာကိစ္စပါ။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိသူတို့က သင်လိုက်ဖြစ်မယ်လို့တွေးထားကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်းအဲ့လို မဟုတ်တဲ့အခါ နှစ်ယောက်လုံးအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။အဲ့လိုမလုပ်ပဲ ကိုယ်မသွားချင်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းငြင်းဆိုလိုက်ပါ။
လူတိုင်းအမှားလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေကမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုသင့်အပေါ်လုပ်ခဲ့ မိတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့ဒါတွေကအတိတ်တွေဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အနာဂတ်အထိသယ်လာဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဆိုးပါ။ဒေါသထွက်ပါ။တစ်ခုခုပြောဆိုလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့သင့်သူငယ်ချင်းကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မသိလိုက်ပဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို နာကျင်စေမိတဲ့ အချိန်တွေရှိနိုင်ပါတယ်။လူဆိုတာ ခံစားချက်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် ဒေါသထွက် စိတ်ဆိုးတဲ့အချိန်၊စိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်စသဖြင့် ရှိတတ်ပါတယ်။စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန် မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုဒေါသတွေပုံချမိခဲ့ရင် ပြီးရင်ပြန်တောင်းပန်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။သင့်ရဲ့ အမှားအတွက်တောင်းပန်ပါ။
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်တိုင်းအနားမှာရှိပေးတာထက် သူတို့လိုအပ်တဲ့ အချိန်ရှိနေပေးတာ၊အကူအညီလိုအပ်တဲ့အချိန်လုပ်ပေးတာမျိုးပါ။တကယ်အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ သူတို့အနားမှာရှိနေပေးတာကသူတို့ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေသလို အကြံဥာဏ်တွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းကြားမှာ ကတိပေးထားပြီးရင် တည်ပါ။ကတိမတည်နိုင်ပဲနဲ့ ကတိမပေးပါနဲ့။ကတိဖျက်တာက ယုံကြည်မှုပျက်သွားစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရင်းပါပဲ။
သင်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားလဲ၊ဂရုစိုက်လဲပြပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအသေးအဖွဲလေးတွေကလည်း တခြားတစ်ယောက်အတွက် အသေးအဖွဲထက်ပိုတတ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာလည်းလေးစားမှုရှိသင့်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းအုပ်စုတွေကြားထဲရှိနေတဲ့ အချိန် ဘာမဆိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုလို့ရပေမဲ့ သူစိမ်းတရံတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လေးစားမှုရှိသင့်ပါတယ်။
လူအယောက်၁၀၀မှာ ၁၀၀လုံးကမယုံကြည်ရင်တောင် ကိုယ့်အပေါ်ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာလည်း သူတို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးပါပဲ။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက်ယုံကြည်မှုရှိမှ အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်လို့ရမှာပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ဆိုရင် သူတို့အပေါ်ယုံကြည်မှုပေးပါ။ သူတို့တကယ် မှားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း ပစ်ပယ်မထားပဲ အဲ့ဒီအမှားကိုသူတို့သိအောင်ဘေးကနေ အားပေးကူညီပေးဖို့လိုပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အချိန်တိုင်း အတူတူပါနေမယ့်သူပါ…
စစ်ကားအကြမ်းတွေကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ”12 Strong ” ရုပ်ရှင်